ဟယျဆေးရိုဒရီဂှကျဇျကို ရညျးစားဖွဈသူက ကားဖွငျ့တိုကျသတျရနျ ကွိုးစားသလား? – Play Maker Sports Journal
အှနျလိုငျးတှငျထှကျပျေါလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျတဈခုအရ ဟယျဆေးရိုဒရီဂှကျဇျဟာကားမတျောတဆမှုကွောငျ့ထော့နငျးထော့နငျးဖွဈခဲ့ကွောငျးတှရေ့ပါတယျ။ကနရေီကြှနျးဒသေခံသတငျးစာ ကလညျးအဆိုပါနရောမှာဟယျဆေးရိုဒရီဂှကျဇျနှငျ့ခဈြသူတို့နထေိုငျတဲ့နရောအနားတှငျဖွဈကွောငျးဖျောပွသှားပါတယျ။
၎င်းငျးတို့စုံတှဲဟာ Grand Canaria Stadium တှငျ ပွုလုပျတဲ့ရှိုးပှဲသို့သှားရောကျခဲ့ကွတာဖွဈပွီးရညျစားဟောငျးအူရာဟာစတုတျစီးတီးကစားသမားဟောငျးနှငျ့အခငျြးမြားပွီးနောကျကားနှငျ့တိုကျသတျရနျကွိုးပမျးခဲ့ကွောငျးမီဒီယာမြားကဆိုပါတယျ။
ဟယျဆေးရိုဒရီဂှကျဇျဟာခဈြသူကိုကလဲ့စားပွနျခတြေဲ့အနဖွေငျ့သူမယှဉျပွိုငျတဲ့ ၂၀၁၈ခုနှဈတုနျးက Big Brother ပွိုငျပှဲမှစောစောစီးစီးထှကျရအောငျယူရို၅၀၀၀သုံးပွီးလူငှားရမျးကာပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။အူရာဟာလညျးယငျးပွိုငျပှဲမှာပထမဆုံးထှကျရတဲ့သူဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဟယ်ဆေးရိုဒရီဂွက်ဇ်ကို ရည်းစားဖြစ်သူက ကားဖြင့်တိုက်သတ်ရန် ကြိုးစားသလား?
အွန်လိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုအရ ဟယ်ဆေးရိုဒရီဂွက်ဇ်ဟာကားမတော်တဆမှုကြောင့်ထော့နင်းထော့နင်းဖြစ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ကနေရီကျွန်းဒေသခံသတင်းစာ ကလည်းအဆိုပါနေရာမှာဟယ်ဆေးရိုဒရီဂွက်ဇ်နှင့်ချစ်သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာအနားတွင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသွားပါတယ်။
၎င်းတို့စုံတွဲဟာ Grand Canaria Stadium တွင် ပြုလုပ်တဲ့ရှိုးပွဲသို့သွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးရည်စားဟောင်းအူရာဟာစတုတ်စီးတီးကစားသမားဟောင်းနှင့်အချင်းများပြီးနောက်ကားနှင့်တိုက်သတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းမီဒီယာများကဆိုပါတယ်။
ဟယ်ဆေးရိုဒရီဂွက်ဇ်ဟာချစ်သူကိုကလဲ့စားပြန်ချေတဲ့အနေဖြင့်သူမယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ၂၀၁၈ခုနှစ်တုန်းက Big Brother ပြိုင်ပွဲမှစောစောစီးစီးထွက်ရအောင်ယူရို၅၀၀၀သုံးပြီးလူငှားရမ်းကာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အူရာဟာလည်းယင်းပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးထွက်ရတဲ့သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။